I-Transposition Tower, i-Communication Tower Design, i-Mobile Antenna Tower - i-XY Tower
ISiChuan XiangYue Power Line Components Co, Ltd. esezobizwa nge-XY Tower） yasungulwa ngonyaka ka-2008.
Experience isipiliyoni seminyaka engama-20 embonini kagesi. ⦁ Ngemishini yokukhiqiza ethuthukile kanye nohlelo lokuphathwa kolwazi.
⦁Quality Management System iqinisekiswe ku-ISO 9001: 2015, ISO 1461 Noma i-ASTMA123. ⦁ Bonke abasebenzi kudingeka badlale indima ekuphathweni kokulawulwa kwekhwalithi.
⦁ Ngenkonzo yeqembu elinolwazi lamakhasimende aphesheya ⦁ Isipiliyoni sokusebenza esilinganiselwe singaphezu kweminyaka engama-20 seqembu labaphathi
⦁ Yakha igridi eqinile. Connection Yenza ukuxhumana komhlaba. Ikhwalithi yokuqala, qotho kuqala.
Isakhiwo esisha sezitshalo namahhovisi siqala ukwakhiwa
I-Sichuan XiangYue Amandla ezinto zomugqa weCop. (XY Tower) yasungulwa ngo-2008. Emizameni yazo zonke izinto, i-com ...
Ithimba lenhloko yesifunda lihlola ifektri
I-XY Tower njengebhizinisi elihola phambili esifundeni sethu, inhloko yesifunda ikunaka kakhulu futhi idinga ...
Ngenxa ye-COVID-19, ikhasimende lethu alikwazanga ukuza efektri yethu ukuze ihlolwe umbhoshongo. NgoNovemba 9, ngaphambi ...
Imali engenayo yokuthengisa eyizigidi ezingama-S20 ngomthamo wokukhiqiza wamathani ayi-30,000 lines imigqa engu-10 yokukhiqiza okuzenzakalelayo nezisebenzi eziyi-150 experience Isipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-25 sisebenza embonini yamandla kagesi
Ingqalasizinda yeXY Tower Inhliziyo yanoma iyiphi indawo yokukhiqiza ingqalasizinda yayo. I-XY Tower inamandla afakiwe okukhiqiza amathani angama-30,000 emibhoshongo ngonyaka. I-XY Tower isilungele ukuhlangabezana nezindinganiso zekhwalithi eziqine kakhulu emhlabeni. Izakhiwo ezakhiwe kahle, imishini yokukhiqiza enomshini kanye nezindawo zokugcina ezinkulu zensimbi zinikeza imikhiqizo yekhwalithi ye-XY Tower ngokwezidingo ezingemuva zamakhasimende. Imboni yokwakha eChengdu yakhiwe esizeni semayini ...
Kungani Ingqalasizinda yeXY Tower yeXY Tower: Inhliziyo yanoma iyiphi indawo yokukhiqiza ingqalasizinda yayo. I-XY Tower inamandla afakiwe okukhiqiza amathani angama-30,000 emibhoshongo ngonyaka. I-XY Tower isilungele ukuhlangabezana nezindinganiso zekhwalithi eziqine kakhulu emhlabeni. Izakhiwo ezakhiwe kahle, imishini yokukhiqiza enomshini kanye nezindawo zokugcina ezinkulu zensimbi zinikeza imikhiqizo yekhwalithi ye-XY Tower ngokwezidingo ezingemuva zamakhasimende. Isitshalo sokwakha eChengdu besilokhu sibail ...
Kungani iXY Tower Towers ingabhekwa nje kuphela njengomkhiqizo, kodwa futhi njengensizakalo. Ukusuka ekufakweni, ekuqambeni, ekuhlanganiseni into ngayinye nokulethwa komkhiqizo owenziwe ngezifiso, i-XY Tower ikhona kulo lonke uchungechunge lwamavelu. Onjiniyela basiza ekwehliseni izindleko zephrojekthi yamakhasimende ethu ngokusebenzisa imidwebo ye-Tower optimized futhi baqinisekise nokunemba kokulungiswa kwesakhiwo ukuze kulungiswe ukulungiswa kwamasayithi. ukukhiqizwa okuhlakaniphile kusetshenziswa kabanzi ezitshalweni zethu. Ukulawulwa kwempahla kungu-throug ...
Transmission umugqa umbhoshongo
Izesekeli zensimbi nokufakwa kwamandla kagesi